एप्पल टिभी सँग अप्टिकल अडियो पोर्ट छैन म म्याकबाट हुँ
यदि तपाईं कनेक्टरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अप्टिकल अडियो तपाईंको घर स्टेरियो प्रणालीबाट स्पष्ट आवाजको मजा लिन, तपाईं नयाँ एप्पल टिभीको साथ ठूलो निराश हुन सक्नुहुन्छ, यसको पछाडि अप्टिकल अडियो पोर्ट छैन.
नयाँ एप्पल टिभीको लागि एप्पल वेबसाइटमा प्राविधिक विवरण द्वारा प्रमाणित भएको रूपमा, अडियो र भिडियो अब तारमा प्रसारण HDMI। यसले चौथो जेनरेशनको एप्पल टिभीको साथ बजारमा अडियोफाइलहरू छोड्दछ दुई विकल्पहरू.
तिनीहरू उपकरणलाई A मा जडान गर्न सक्छन् हाई-फाई रिसीभर र स्पिकरहरूको अडियो र टिभीमा भिडियो, वा अर्को विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् एयरप्ले र एयरपोर्ट एक्सप्रेस वायरलेस उपकरण एप्पलबाट, जसमा अप्टिकल अडियो आउटपुट छ, अडियोलाई तपाईंको होम थियेटर प्रणालीमा फिड गर्नका लागि।
अर्कोतर्फ, चौथो जेनरेशन डिकोडरसँग समर्थन छ HDMI १. over अधिक डल्बी डिजिटल प्लस .7.1.१, डॉल्बी डिजिटल Dol.१ यसको पूर्ववर्ती भन्दा एक उल्लेखनीय सुधार। यहाँ पोर्ट र इन्टरफेस को पछाडि छन् Apple TV 4.
र अब उनीहरूसँग तुलना गर्नुहोस् तेस्रो जेनरेशन एप्पल टिभी.
यो स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ कि अप्टिकल अडियो पोर्ट नयाँ बक्सबाट हराइरहेको छ। बाहेक नयाँ एप्पल टिभी छ दुई गीगाबाइट र्यामआईप्याड एयर २ जस्तै छ र आईफोन and र आईफोन Plus प्लसको भन्दा दुई गुणा बढी।
को अधिकतम आकार aplicación नयाँ एप्पल टिभीको लागि हो २००MB मा सीमितथप रूपमा, तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू र खेलहरू सबै भण्डारण गर्नुपर्दछ आईक्लाउडमा डाटा.
नयाँ एप्पल टिभी आधार मूल्यबाट सुरू हुन्छ $ 149 र अक्टुबर को अन्त मा उपलब्ध हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » एप्पल टिभी सँग अप्टिकल अडियो पोर्ट छैन, तर यसले डोल्बी डिजिटल प्लस .4.१ गर्दछ
त्यस्तै, त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसले अप्टिकल अडियो प्रयोग गर्छन्, र अनुप्रयोगहरूको बारेमा पछि सीमा बढ्न सक्दछ, तर यो तार्किक छ वा हुनसक्छ उनीहरूलाई त्यहाँ यति धेरै आवश्यक पर्दैन, किनभने यदि निश्चित रूपमा उनीहरूले 30० जीबी खेलहरू बनाउँदैनन् भने।
ठिक छ, मेरो विचारमा हामी मध्ये धेरै त्यस्तै छन् जसले अप्टिकल आउटपुट मार्फत HIFI रिसीभरमा एप्पल टिभी जडित छ।
मैले नयाँ एप्पल टिभी किन्ने योजना गरेको थिएँ, तर यदि म यसलाई रिसीभरमा जडान गर्न सक्दिन भने यो बेकार हो। लाजमर्दो कुरा
Eme.efebe लाई जवाफ दिनुहोस्
दुई विकल्पहरू हेर्नुहोस् जुन मैले पोष्टमा राखेको छु, हुनसक्छ तपाईसँग यो समस्याको समाधान छ।
मैले पुरानो एप्पल टिभीलाई एयरप्ले मार्फत नयाँको साथ जोडेको छु र यसले सहि काम गर्दछ। तपाइँले नयाँ एटीभीमा स्पिकर आउटपुटको रूपमा केवल पुरानो एप्पल टिभीको नाम छान्नुपर्नेछ।
जाभी लोपेज भन्यो
म एउटा कुरा कोशिश गर्छु। म नयाँ एप्पल टिभीलाई, एयर प्ले मार्फत, पुरानोसँग जडान गर्ने प्रयास गर्नेछु। मलाई भन्न देउ
जाभि लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
एयरपोर्ट एक्सप्रेस समाधान र यसको अप्टिकल आउटपुटको साथ, .5.1.१ / .7.1.१ सही तरीकाले काम गर्दछ? धन्यवाद।
जीसक्लोमलाई जवाफ दिनुहोस्
ध्वनीको लागि लिंकको रूपमा पुरानो एप्लेटलाई प्रयोग गर्दै, फिल्म पूर्ण रूपमा अडियो र भिडियोमा सि sy्क्रोनाइज हुन्छ? त्यहाँ कुनै ढिलाइ छैन ...?
Pepes लाई जवाफ दिनुहोस्
म कसरी नयाँ एप्पल टिभीलाई मेरो नयाँ स्मार्ट टिभीसँग जडान गर्न सक्छु जुन केवल ऑप्टिकल आउटपुट र .5.1.१ होम सिनेमा ऑप्टिकल आउटपुटसँग छ, पुरानो टिभीसँग मैले टिभीबाट होम सिनेमामा धनीका लागि जडान गरेको थिएँ र अहिले लक्जरी 5.1.१ थियो। म अलिकति हराएको छु, कुनै सहयोग?
यस बुधवारको मुख्य भनाइमा किन म्याकको उल्लेख छैन?